Iscreen sesinyithi sinemisebenzi emine elandelayo: Uvavanyo: lusetyenziselwa ubukhulu becala amasuntswana, umgubo kunye nokuhlolwa kwesinyithi, amalahle, irabha, ipetroleum, ishishini lamachiza, ikhemesti, imoto, iiseramikhi, iglasi kunye namanye amashishini. Ukukhusela: isetyenziselwa ulwakhiwo lwaseburhulumenteni, ba ...
Uphi umnatha wentsimbi osetyenziswa ngokubanzi
Umnxeba wocingo lwentsimbi usetyenziswa ngokubanzi, ngakumbi eludongeni lwezakhiwo, ke indlela yokufaka izixhobo. Into yokuqala ukubeka ibhodi ekhutshiweyo emhlabeni, emva koko ubeke umaleko obonayo wephepha lealuminium kulo. Okokugqibela, umnatha wocingo lwentsimbi ubekiwe, emva koko imibhobho kunye neentambo zi lai ...
Imivalo yentsimbi edityanisiweyo kulwakhiwo lwexesha elizayo | Ihlabathi leeComposites
I-GFRP ishenxisa umngcipheko wokubola kunye nokunyusa ukomelela kwekhonkrithi eqinisekisiweyo amatyeli amane ukuhlangabezana neemfuno ezizayo njengoko ukugcwala kwabantu, ukuhlala ezidolophini kunye nemozulu embi inyuka. #insidemanufacturing # frprebar # Infrastructure Eyona projekthi iphambili ye-GFRP. Malunga neekhilomitha ezili-11,000 ze-GFRP reba ...